Puntland oo si yasmo ku jirto uga jawaabtay Hadalkii kasoo yeeray Wasiir Goodax Barre. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee barlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa masuuliyiinta waxbarashada Puntland ugu baaqay inay ka qeyb qaataan imtixaanka midaysan ee dowladda federalku qaado.
Waxaase uu ku taliyay in Puntland ay kaalin ku yeelato dejinta ,qaadista, sixitaanka iyo baahinta natiijada imtixaanka si ay meesha uga baxdo loollanka wasaaradaha waxbarashada ee federalka iyo in la xalliyo dhibta ardada ka soo gaaraysa helitaanka shahaadada.
Guddoomiye ku xigeenka barlamaanka ayaa sheegay inuu jiro khilaaf siyaasi ah oo dhaafsiisan waxbarashada heerarkeeda kala duwan oo u dhexeeya hoggaanka dowladda federaalka iyo Puntland.
“Ma ah waxa la isku hayo waxbarashada keliya , balse waxaa la isku khilaafsan yahay waa jaangooyada siyaasadda dowladda federaalku dalka ku hogaamineyso oo u baahan is oggol, is qancin iyo isu tanaasul ka yimaadda labada heer dawladeed.” ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Puntland Ismaaciil Warsame.
Halka guddoomiye ku xigeenka ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre wareysi siiyey BBC uu ku sheegay in Puntland aysan siindoonin shahaado aysan imtixaankeeda galin.
Wasiir Goodax ayaa Puntland ugu baaqay in ardaydeedu qeyb ka noqdaan imtixaanka mideysan ee ay qaado wasaaradda waxbarashada heer federaalka, hadeysan taas ogoleyna ay isku filnaato.
Previous articleKheyre iyo Wasiir Cawad oo degdeg uga hadlay Dhulgariirka ku dhuftay Dalka Turkiga + Tacsi.
Next articleAKHRISO:- Maxay tahay sababta loo kala diray Rugta Ganacsiga Gobolka Banaadir “Xog Cusub”.